Homeसमाचारअर्जुन रामपाल विवाह नगरी बने बाबु, जेठी छोडेर चौध वर्ष कान्छी मोडलसँग…
January 9, 2021 admin समाचार 7400
अर्जुनको जन्म २६ नोभेम्बर १९७२ मा जब’लपुरमा भएको थियो। उनी सैन्य पृष्ठभू’मिको एक परिवारका हुन्। उनका हजुरबुवा ब्रिगेडियर गुरदयाल सिंहले भारतीय सेनाका लागि पहिलो आ’र्टिलरी बन्दूक बनाएका थिए । अर्जुन सानै छँदा आमा बुबाको सम्ब’न्धविच्छेद भएको थियो। यस्तो अवस्थामा, सम्बन्ध वि’च्छेदपछि शिक्षका आमासँगै रहे। अर्जुनले हिन्दू कलेज, दिल्ली विश्वविद्यालयबाट अर्थशा’स्त्रमा स्नातक गरेका छन्।
बलिउडमा प्रवेश गर्नु’अघि अर्जुन सफल मोडेल थिए। लोकप्रिय फेसन डि’जाइनर रोहित बलले एक पार्टीमा अर्जुनलाई देखे र उनको लुक्सबाट प्रभावित भए। उनले अर्जुनको मोडलिङ करियरलाई अ’गाडि बढाउन मद्दत गरे। १९९४ मा अर्जुनले मोडलि’ङमा सोसाइटी फेस अफ द ईयर अवार्ड प्राप्त गरे। २००१ मा, अर्जुनले फिल्म ‘प्यार इश्क और मोहब्बत’ बाट बलि’उडमा डेब्यू गरे।
अर्जुनले यस फिल्मको लागि धेरै डेब्यू पुर’स्कार प्राप्त गरे। उनलाई २००८ मा ‘रक अन’ को लागि राष्ट्रीय पु’रस्कार पनि प्रदान गरिएको थियो। ‘मोहब्बते’ मा काम गरेका किम शर्मा अर्जुनका काका हुन्। अर्जुन रामपाल २००४ मा फिल्म लक्ष्यको लागि पहिलो विकल्प थिए, तर समय अभा’वका कारण उनले यो फिल्म गर्न सकेनन र ऋतिक रोशन यस फिल्ममा छानिए।
अर्जुनले १९८८ मा सुप’रमोडल मेहर जेसियासँग विवाह गरे। उनीहरुका दुई छोरीहरु छन्: माहिका र मायरा। माहिका २००२ मा जन्मेकी थिइन् भने माइरा २००५ मा जन्मिएकी थिइन्। अर्जुन-मेहरको विवा’हको २१ बर्ष पछि दुबैले सन् २०१९ मा सम्बन्ध’विच्छेद भयो।
सम्बन्ध’विच्छेद पछि अर्जुन दक्षिण अफ्रिकी मोडेल गेब्रि’एलासँग लिभ इन सम्बन्धमा छन्। गब्रिएला अर्जुनभन्दा १४ वर्ष कान्छी छन्। १८ जुलाई २०१९ मा गब्रिए’लाले छोरालाई जन्म दिइन् । दुवैको छोराको नाम एरिक हो । अर्जुन अन्तिम पटक २०१८ मा रिलीज भएको जेपी दत्ताको फिल्म ‘पल्टन’ मा देखेका थिए। उनको अर्को फिल्म ‘नेल पोलिस’ हुनेछ जुन २०२१ मा रिलीज हुनेछ।
अर्जुनले मोड’लिङमा धेरै नाम कमाए तर बलिउडमा १९ बर्ष बिताए पनि उनले खास कुरा देखाउन सकेनन। ‘मोक्ष’, ‘दीवाना’, ‘दिल का रिश्ता’, ‘असंभव’, ‘एक अजनाभी’ जस्ता फिल्महरू फ्लप भए।’रा.वन’, ‘हीरोइन’, ‘डी-डे’, ‘रोय’, ‘ड्याडी’ ले पनि बक्स अफिसमा राम्रो प्र’दर्शन गर्न सकेनन्। – इताजा खबरबाट
पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई भएको स्वास्थ्य समस्या के हो ? किन लगियो दिल्ली ?
June 16, 2021 admin समाचार 4731
पूर्वप्रधा’नमन्त्री एवम् नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल स्वास्थ्य उपचारका लागि भारतको दिल्ली प्र’स्थान गरेका छन् । उनलाई अस्पता’लले रेफर गरेको नभइ परिवारकै आग्रहमा दिल्ली लगिएको हो । पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले यस अघि पनि भारतकै
December 16, 2020 admin समाचार 8526
October 7, 2020 admin समाचार 11037
स्था’नीय बजारमा सुन’को मूल्य घट्ने क्रम सुरु भएको छ । शुक्र’बारको तु’लानामा हिजो आ’इतबार प्रतितोला ३२ हजार ३ सय कायम भए’को सुनको मूल्यमा अझै कमी आउने भएको छ । ‘एनआईसी, स्टान्डर्ड चार्टर्ड, मा’छापुच्छरे र एन’एमबी